Waa maxay AdiNet Mittelhessen? | Adinet Mittelhessen
Waa maxay AdiNet Mittelhessen?
Waa shabakad cusub oo ka hortaga midab takoorka gobolka Mittelhessen.
Waxaan rabnaa inaan dhisno shabakad guud oo ka hortaga midab takoorka Mittelhessen. Ujeedadu waa in la isu keeno dhammaan kuwa Jilayaasaha rag*dumar midab takoorka iyo si hab hufan layskugu xiro khibradaha iyo kheyraadka. Isla mar ahaantaana, waxaan ka hor tagi doonnaa ula dhaqan leh kala sooc ama midab takoor iyo naceyb.
Marka la soo koobo: waxaan rabnaa inaan si wada jir ah u wada tartanno si aan uga dhigno midab takoorka dhammaan qaabab la arki karo - iyo inaan la dagaallanno.
Maxuu yahay jawiga juqraafi ahaan waxqabadka AdiNet Mittelhessen?
AdiNet Mittelhessen wuxuu ka kooban yahay degmooyinka gaar ahaan-magaalooyin:
Gobolka Limburg Weilburg
Magaalooyinka leh xaalada gaar ah:
Waa maxay tiirarka AdiNet Mittelhessen?
Isku xirnaanta Jilayaasaha rag*dumar waxa uu aasaas u yahay mashruuceena. Waxaan si gaar ah u jeclaan lahayn inaan ku soo darno wakiillada raga *iyo dumar ay saameeyeen midab takoorka ka qaybgalka dhacdooyinka wadajirka, shirarka caadiga ah, iyo sameynta kooxda hogaaminta iyo "miisaska wareega" ee ku saabsan mowduucyada kala duwan, adkeynta wadashaqeynta wada-hawlgalayaasha rag*dumar.
Awood siinta iyo shahaadada
Waxaa jirta baahi weyn oo xagga aqoonta iyo tababarka ah, gaar ahaan Jilayaasaha taburaca rag*dumar. Ayada oo la adeegsanayo awood-siinta iyo aqoon-isweydaarsiga seeminaarka, ma ahan kaliya inaan xoojino mutadawiciinta, laakiin sidoo kale dadka laftooda ay saameeyeen takoorka. Waa in dib loo xaqiijiyaa si ay si firfircoon uga difaacaan takoorka oo ay aqoonsadaan kala sooca fara badan.
Kor u qaadista wacyiga iyo xiriirka bulshada
Shaqada xiriirka bulshada ee la bartilmaaman waxa ka caawisaa dareenka dadka si ay ula macaamilaan kuwa ay saameeyeen midab takoorka. Waxaan qorsheyneynaa xirmo dhan oo ah dalacsiin. Marka lagu daro shirarka takhasuska leh iyo shirarka jaraa'id, waxaan abaabusnaa aqoon isweydaarsi iyo munaasabado macluumaad. Intaas waxaa sii dheer, waxaan rabnaa inaan soo bandhigno meel loogu talagalay macluumaadka qiimaha leh ayadoo loo marayo websaydhkeenna sidoo kalena aan abuuri karno warbiximo ama macluumaadka aan anaga leenahay.
Waxaan rabnaa inaan bilowno ka hortag weerar ah oo aan horumarinno istiraatiijiyooyin horudhac ku ah takoorka. Si taas loo gaaro, waxaan horumarinaa fikradaha-kaladuwan iyo tilmaamaha waxqabadka oo waxaan bilaabeynaa "ka hortag koox" oo ka kooban hawlaya-sha rag*dumar ee heegaanka ah kana socda AdiNet-Mittelhessen.
Waa maxay aragtida AdiNet Mittelhessen?
Himiladeena waa mid ah aqbalaada, xushmadda iyo wada noolaanshaha midab kala sooca. Waxaas oo dhami waa inay ka yimaadaan xarunta bulshada oo si firfircoon loogu noolaado.
Shabakadayada waxa ay ka socota wada-hawlgalayaasha rag*dumar. Wadajir ahaan waxaan heleynaa fursad si takoor looga dhigo mowduuc. Kaliya ma xiisayneyno inaan isdhaafsanno waayo- aragnimada iyo xoojinta, laakiin sidoo waxaan xiseyneynaa hirgelinta himilooyinka. Waxaan jeclaan lahayn inaan ula dhaqanno dadka kale si taxadar leh, ixtiraam leh oo aan kalasooc lahayn - ayadoo aan loo eegayn jinsiyadooda, jinsiga, diinta, da 'da, naafo, nooca galmada iyo aqoonsigooda. Intaas waxaa sii dheer, waa in la sheegaa in astaamaha takoorida (sida, asalka bulshada / heerka bulshada, culeyska iwm) ay door ka ciyaaraan - xitaa haddii aan wali si cad loogu sheegin AGG.
Ku soo dhowow wada-hawlgalayaasha rag *dumar ee shabakadda!
Shabakadayada waxa ay ku nooshahay ka qeybgalkaaga! Waxaan u baahanahay khibradaada si aan u abuurno isbahaysi xoogan oo ah dhanka takoorka. Wadajir waxaan rabnaa inaan qabanno shaqo firfircoon oo firfircoon. Waxaan rabnaa inaan isdhaafsano khibradaha, dhisno qaab dhismeed oo aan anaga isku xoojino.
Taasi waa mowduua guud ee aan wadaagno! Nala soo xiriir!
Kumaa ka dambeeya AdiNet Mittelhessen?
Adiset Mittelhessen xilligaan taageera kooxda caalami ah. Kooxda shaqada dhexdeeda wakiilada rag*dumar dee gobolka Marburg-Biedenkopf iyo Gießen iyo labada jaamacadood ee ku yaal jaamacadaha Marburg iyo Gießen. Intaas waxaa sii dheer, in ay ururada oo dhan iyo shakhiyaalka oo dhan gadaashena taagan yihiin, kuwaa oo si firfircoon uga shaqeynaya sha- bakaddeena! Xattaa Adiga!
Xiriir: info@adinet-mittelhessen.de oder 0641 9390-1790 oder -1713